Nezvedu - Huaian ASN Medical technology Co., Ltd.
Huaian ASN Chiremba tekinoroji Co., Ltd.
tiri matsva mugadziri izvo dzidzira mune zvigadzirwa 'tsvakurudzo uye kukura, kugadzirwa uye okutengesa. Huaian ASN Medical Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2012. Kubvira payakagadzwa, yanga ichishandira pamwe nemayunivhesiti uye makoreji kuita matekinoroji mumunda wepurasitiki wemapfupa kuburikidza nekubatanidzwa kwepedyo kwekugadzira, kudzidza uye kutsvagisa.
Mushure memakore ekuedza kusingazungunuke, Huaian ASN Medical Technology Co, Ltd. ikozvino yave yekutanga-kirasi inogadzira yeOrthopedic Kukanda tepi uye zvimedu munyika. Isu tinogara tichitevedzera mhando yemhando yekuchenjera dhizaini, kugadzirwa kwehunyanzvi, kushingairira sevhisi, kurwira yekutanga-kirasi, kusimudzira budiriro netekinoroji. Isu tinogara tichitevedzera kune bhizinesi uzivi hwechokwadi uye kuvimba, uye kuhwina-kuhwina pakati peanogamuchira uye mutengi. Isu tinotarisa mhando sehupenyu hwebhizinesi, uye tinodzosera iyo nharaunda nemhando yepamusoro zvigadzirwa pamitengo yakaderera. Dzokera kune mushandisi!
Iyo kambani ine gumi nematanhatu ekuzvidzivirira patent uye inozivisa emarudzi emhando yepamusoro mabhizinesi.
Tine ISO 13485 system certification, EU CE certification, US FDA certification uye inobatanidzwa mune dzakawanda huru dzekutengesa dzimba kumba nekune dzimwe nyika gore roga roga.
Kambani yedu inonyanyo kugadzira zvigadzirwa zvine patenti senge Orthopedic Kukanda tepi, kugadzira matepi, uye petroleum pombi yekudzivirira matepi. Isu takapinza zvigadzirwa nemidziyo uye tikaramba tichigadzira zvigadzirwa zvitsva. Zvigadzirwa zvekambani zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri dzinosanganisira United States, Canada, Germany, Britain, Italy, Egypt neIndia. Nezve zvigadzirwa zvigadzirwa, timu yakazvipira mushure-yekutengesa sevhisi yakagadzirirwa kugadzirisa kushushikana kwevatengi. Pamugwagwa wekusimudzira mune ramangwana, kambani inoomerera pane zvakatemwa zvekupa vatengi zvigadzirwa zvakanakisa, kugadzirisa zvigadzirwa zvavo nemasevhisi, uye kudzorera vatengi vatsva nevakuru.
Takatora chikamu mumitambo mizhinji yenyika. Unogona kutarisa ruzivo rwezviratidziro zvatakatora chikamu mazviri kare.